Waa maxay sababta ay Barcelona isaga hartay loolanka ay ugu jirtay saxiixa da’yarka Ajax Matthijs De Ligt? – Gool FM
Waa maxay sababta ay Barcelona isaga hartay loolanka ay ugu jirtay saxiixa da’yarka Ajax Matthijs De Ligt?
Abdirashid Mohamud June 23, 2019
(Barcelona) 23 June 2019. Kooxda Barcelona ayaa isaga hartay gabi ahaan raacdadii ay ugu jirtay saxiixa da’yarka Ajax Matthijs De Ligt kaas oo noqday difaaca loogu doonista badan yahay, waxaana la fahamsan yahay iney jirto hal sabab oo kooxdaan ku qasabtay iney isaga harto.
Sida ay sheegayaan saxaafadda, Balaugrana kaliya lacagaha mushaaraadka uu u rabo ayaa culeys badan ku noqday waxeyna doorbideen iney isaga haraan.
Xiddigaan wuxuu dalbaday in mushaar ahaan loo siiyo 10 Malyan oo Pound, warbaahinta talyaaniga ayaana qireysa inuu xiddigaan doortay inuu 62 Malyan oo Pound ugu wareego Juventus.
Tartankii u dhaxeeyay kooxaha qaaradda yurub ayaa hadda u muuqda mid soo dhamaaday, 19-jirkaan ayaana qarka u saaran inuu ku biiro kooxda marwada duqda ah, sidoo kalana final-kii koobka UEFA Nations League waxaa ka codsaday inuu Turin yimaado Cristiano Ronaldo.
Balaugrana waxey cabsi badan ka qabtaa hadii ay xiddigaan u ogolaato lacagahaas maadaama uu yahay xiddig da’yar hadana cusub iney saameyso qolka labiska, sidoo kalana ay lunto awoodda ay ku miisaamaan mushaaraadka xiddigaha.
Wararka talyaaniga ka imaanaya waxey sidoo kale sheegayaan in Juventus iyo Ajax ay ka heshiiyeen lacagaha ay ku kala wareegsanayaan xiddiga, kaliya ay dhiman tahay inuu xiddigaan heshiis shaqsi ah la gaaro kooxda difaacaneysa horyaalka talyaaniga.
Taageerayaasha xulka Brazil oo dalbaday iney quarter final-ka la ciyaaraan Argentina hadii ay soo baxaan.
Kulamada maanta iyo caawa la ciyaarayo Koobka Qarammada Afrika, Copa America iyo Koobka Adduunka Dumarka 2019 iyo saacadaha ay soo galayaan